Golaha wakiilada Puntland oo ansaxiyay miisaaniyada sanadka 2013
January 7, 2013 - Written by
Garoowe:-Golaha wakiilada dowllada Puntland oo kulan ku yeeeshay xarunta Golaha wakiilada ee Puntlland ayaa waxaa ay saaka ansixiyeen miisaaniyada sanadkan 2013 ka dib dood dheer oo dhex martay Xilidhibaanada.
Kulanka maanta ka dhacay xarunta Golaha wakiilada ee Puntlland ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 48 xilidhibaan iyagoo su,aalo wiidiiyey wasiirka maaliyada ee Puntlland oo isagu hor yimid Golaha wakiilada ee Puntlland.
Dood iyo su,aalaha ugu badaneyd ee wasiirka maaliyada la wiidiiyey ayaa waxaa ugu badanaa xuquuqda ciidanka dowlladu ay ku leeyihiin miisaaniyada sanadka 2013.
Guddoomiyaha golaha wakiilada dowllada Puntlland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa hadal kooban ka jeediyey golaha wakiilada Puntland isagoo ugu baaqay xilidhibaanada isku duubni iyo in laga foojignaado kuwa doonaya in ay wiiqaan horumarka dowlladnimo iyo nabadgelo ee ka jirta Puntlland.
Guddoomiyaha golaha wakiilada dowllada Puntlland Cabdi rashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay in ay jiraan cadow badan oo dano kale duwan ka leh in ay burburiyaan hanaanka dowllada nimo oo dadka degaanka u dhashay ay dhisteen arrinkaas oo ay wadaan buu yiri dad leh arrimo siyaasadeen iyo arragagixisada caalamiga ah oo dulaan ku ah jiritaanka Puntlland.
Guddoomiyaha golaha wakiilada dowllada Puntlland Cabdi rashiid Maxamed Xirsi ayaa ugu baaqay dowllada iyo shacabka in si isku duuban ay uga soo horjeestaan cadowga argagixisada uu ugu yeeray oo uu sheegay in ay dabargoyn ku wadaan idhihii iyo waxgaradkii umada isagoo sheegay in ay iska dhicin doonaa cid walba oo duulaan ku ah jiritaanka Puntlland.
231,806 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress